AddShoppers: Sehatra fampiharana varotra sosialy | Martech Zone
AddShoppers manampy anao hampiroborobo ny fidiram-bola ara-tsosialy ny fampiharana, manampy bokotra fizarana ary manome anao Analytics amin'ny fiantraikan'ny sosialy amin'ny varotra. AddShoppers dia manampy ny mpamatsy ecommerce hampiasa ny media sosialy hanao varotra bebe kokoa. Ny bokotra fizaran'izy ireo, valisoa ara-tsosialy ary fampiharana fizarana mividy dia manampy anao hanana fizarana sosialy bebe kokoa izay afaka mivadika ho varotra sosialy. AddShoppers Analytics manampy anao hanaraka ny fiverenanao amin'ny fampiasam-bola ary hahatakatra izay fantsona sosialy niova fo.
AddShoppers mampitombo ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny fampidirana fampiroboroboana sosialy amin'ny fitaovana fizarana sosialy. Ankoatry ny fampitomboana ny firotsahana, ny fampiakarana ny fampiroboroboana ny tapakila ara-tsosialy sy ny fizarana ara-tsosialy dia manampy amin'ny fampihenana ny fandaozana ny sarety fiantsenana ary hampiakarana ny tahan'ny fiovam-po.
Fampiharana izay mahatonga ny fivarotanao an-tserasera ho sosialy
Kitendry haino aman-jery sosialy marani-tsaina manamora ny fampitomboana ny fivezivezena sy ny varotrao amin'ny fanondroana anarana ara-tsosialy. Ny bokotra fizaran'izy ireo dia ahafahana mizara vokatra mora ho an'ny mpanjifanao hahafahan'izy ireo mizara ny vokatra tian'izy ireo amin'ireo tambajotra sosialy tiany.
Valisoa ara-tsosialy manampy anao hampitombo ny fizarana vokatra sosialy amin'ny alàlan'ny famoronana programa referral ara-tsosialy amin'ny alàlan'ny famporisihana ny fampiasana bokotra fizarana. Ity fampiharana ity dia manampy amin'ny fampitomboana ny tahan'ny fiovam-po amin'ny fampihenana ny fandaozana ny sarety fiantsenana amin'ny boaty coupon.
Fanadihadiana ara-tsosialy manampy anao hahatakatra ny zava-bitan'ny mpivarotra anao amin'ny alàlan'ny fanarahana ny hetsika fizarana rehetra mitranga amin'ny fivarotanao. Azonao atao ny mahita hoe impiry no nozaraina ny vokatra tsirairay, iza no nizara, ny isan'ny tsindry isaky ny fizarana, ary maro hafa.
Fanarahana ROI ara-tsosialy manampy anao hahatakatra ny lanjan'ireo fiasa ara-tsosialy amin'ny fivarotanao. Amin'ny fampiasana an'ity fampiharana ity dia azonao atao ny mandrefy ny sandan'ny J'aime, Tweet, Pin, ary hetsika sosialy hafa.
Fizarana mividiana AddShoppers manampy ny mpanjifanao hizara ny zavatra novidiny tamin'ny namany.
Discovery Wall Ny fampiharana (Pro) dia manamora ny manampy rindrina amin'ny vokatra ara-tsosialy indrindra amin'ny tranokalanao. Avelao ny mpividy hitady vokatra rehefa mizotra amin'ny fotoana tena izy ao amin'ny tranonkala sosialy.
Fividianana mpivarotra sosialy (Pro) mampifandray ny elanelana misy eo aminy fidirana ara-tsosialy ary fidirana eCommerce. Ady ny fisoratana anarana famonoana olona noho ny fisoratana anarana amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fampidirana sonia tsy miovaova ho an'ny mpanjifanao amin'ny saha efa feno. Ampitahao amin'ny anton-javatra ara-tsosialy ny valintenin'ny mpanjifanao.
AddShoppers mitondra $ 1,000,000 isam-bolana amin'ny varotra sosialy. Izy ireo dia mamela ny angon-drakitra fifandraisana ara-tsosialy ara-dalàna amin'ny alàlan'ny API ary manome hevi-dalina ho an'ny influencers. Ny sehatr'asa ROI tadidin'izy ireo dia ahafahan'ny mpisolovava mizara rahoviana, aiza, ary ny fomba tadiavin'izy ireo ary ahafahan'izy ireo manome alalana coupon ambony sy fampiroboroboana avo lenta handrisihana ny mpisolovava ho an'ny mpanjifa.
AddShoppers amin'izao fotoana izao dia namokatra fampidirana miaraka amin'i Klout, Wishpot, RJ, Metrics, Rapleaf, Bronto, Google, Analytics, MailChimp, SilverPop, Vertical, Valiny, ExactTarget, Strong, Mail, Listrak, WordPress, Accenture, Omniture, Site, Catalyst, Xing, LinkedIn , tumblr, Kaboodle, Polyvore, StumbleUpon, Google+, Twitter, Pinterest, NetSuite, Zoho, Salesforce, hubspot, pardot, Marketo, eloqua, Act-On, Tagman, tealium, ensighten, google, tag, manager, openbravo, openerp, sap , fifandraisana-adiresy, coremetrics, brighttag, CubeYou, Emma, ​​Marketing, Piwik, Wish, Wanelo, Webimax, Adobe, Storm, Tag, Manager, Lexity, Webtrends, Epicor, Sage, ERP, Oracle, JD, Edwards, Microsoft, Dynamics , GP, SAP, Business, One, IBS, Enterprise, Intacct, Svpply, Responsys, ary CheetahMail.
Tags: AccentureAct-OnaddshoppersAdobeAnalyticsbrighttagBrontoraharaham-barotrafitaovana hitondra fiovana goavanaCheetahMailConnect-adiresycoremetricsCubeYoufihetsehanasehatra sosialy ecommerceEdwardseloquaEmmamihazonaorinasaEpicorERPprectargetGoogle +GPhubspotIBSIntacctJDKaboodlekloutlexityLinkedInListrakMailmailchimpmpitantana-barotramarketomari-pandrefesanaMicrosoftnetsuiteomnitureirayopenbravoOpenERPOraclepardotPinterestpiwikPolyvorerapleafResponsevalinyRJSagesalesforceSapSilverPopSitevarotra sosialyStormStrongStumbleUponSvpplytenifototratagmanTealiumTumblrTwittermitsanganaWaneloWebimaxwebtrendsmaniryWishpotWordPressXingZoho
Maninona no tokony ho mamaly ny lohahevitra WordPresso manaraka